यी हुन् मानिसमा हुनुपर्ने ३२ लक्षण – Gandaki Chhadke
हामीले कुनै पनि महिलामा ३२ लक्षण हुनु राम्रो भनेर सुन्ने गरेका छौँ । कुनै पनि महिलामा ३२ लक्षण हुनु धर्मशास्त्रमै राम्रो मानिन्छ । यद्यपी ३२ लक्षण भनेका के के हुन् हामीलाई थाहा नहुन सक्छ । मानिसले भन्ने गरेका ३२ लक्षण पढ्नुहोस ।पूर्वीय सभ्यता प्राचीन कालदेखि नै सौन्दर्यप्रति सजग पाइन्छ। यहाँका मनिषीहरूले कस्ता नरनारी सुन्दर एवं शुभदर्शना हुन्छन् भनेर धेरै कृतिमार्फत् वर्णन गरेका छन्।
धेरै मात्रामा नारी सौन्दर्यलाई नै महत्त्व दिइएको पाइए पनि पूर्वीय शास्त्रमा पुरुष सौन्दर्यलाई पनि पर्याप्त स्थान दिइएको छ।पूर्वीय दर्शनमा विशिष्ट व्यक्तिहरूका शरीर एवं स्वभावमा हुने प्रसिद्ध बत्तीसवटा शुभलक्षण बताइएको छ। यस्ता लक्षण हुने पुरुष प्राचीन भारतवर्षमा आदर्श मानिन्थ्ये।१. पद्मासनमा बस्दा वृत्ताकार (गोलो) आसनमा हुनु ।२. हातका औँला लामा–लामा हुनु ।
३. औलाका कापमा छाला विशेष बढी र जोड्दा टम्म मिलेका हुनु ।४. छाला नरम हुनु र वृद्धावस्थामा पनि युवाको जस्तै तेज हुनु ।५. शरीरमा विभिन्न सात सुगन्ध हुनु ।६. हरिणका जस्ता फिला हुनु ।७. गुप्ताङगहरु गुप्त रहनु ।८. शरीरको माथिल्लो भाग सलक्क मिलेको हुनु ।९. शरीरका सम्पुर्ण अङगहरु सुगठित हुनु ।१०. काँध पुष्ट, चौडा र गोलो हुनु ।११. पाखुरा राम्ररी फर्कने हुनु ।१२. पाखुरा लामा हुनु ।
१३. सम्पुर्ण शरीर तेजोमय हुनु ।१४. शंख समान घाँटी हुनु ।१५. सोझो र सिंहको जस्तो चिउँडो हुनु ।१६. ३२ वटा दाँत हुनु ।१७. चम्किला र टमक्क जोडिएका दाँत हुनु ।१८. समान मिलेका दाँत हुनु ।१९. बंगारा स्वच्छ र सुन्दर हुनु ।२०. जिब्रो लामो हुनु ।२१. विभिन्न सानोभन्दा सानो स्वाद लिने शक्ति हुनु ।२२. पातलो स्वर हुनु ।२३. बिभिन्न विषयमा ज्ञानको चासो राख्ने बानी हुनु ।२४. कुरामा अडिक रहनु ।
२५. आँखीभौँका बीच रौँकै कोमल र सूक्ष्म रेखा हुनु ।२६. मिलेको कपाल हुनु ।२७. अल्छी नहुनु ।२८. अरुलाई चाडै प्रभावमा पार्न सक्ने क्षमता हुनु ।२९. शरीरमा धेरै र परस्पर टाँसिएका नरम र दाहिनेतिर घुमेका रौँ हुनु ।३०. चमक्क चम्किने केश हुनु ।३१. स्वभाव लज्जालु हुनु ।३२. दुढ स्वभाव हुनु ।
सरकारसँग वार्ता गर्न पूर्वज’नमुक्ति सेना सहित ‘विप्लव’का नेता काठमाडौंमा , ठाउ गो’प्य राखियो
टिकटक बनाउन घरमा आएकी ब’हिनी ब’ला’त्का’र गर्ने दाजु पक्राउ